Manangana Zavakanto Sy Mozika Tsy Ahafahany Mody Ny Ankohonana Syriana Iray Ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2016 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, عربي, bahasa Indonesia, English
Lahatsoratr'i Jason Strother nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 21 Jona 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Anisan'ireo an-tapitrisan'ny Syriana nandositra ny tanindrazany hatramin'ny nanombohan'ny ady an-trano tamin'ny 2011 i Jaber sy ny ankohonany ahitana olona efatra. Saingy tsy monina any Etazonia amin'ny maha mpialokaloka ry zareo. Tonga noho ny fanampian'ny Institute of International Education’s Scholar Rescue Fund na Sompitra Fanavotana Mpampianatra Ambony an'ny Ivontoeram-Panabeazana Iraisampirenena miorina ao New York ry zareo. Efa hatramin'ny taona 2002 ny vontoeram-Panabeazana Iraisampirenena no niezaka nampifandray Manampahaizana tratran'ny fanenjehana miisa 650 eo ho eo (maro amin'izy ireo no avy ao Iràka sy Syria) amin'ny sekoly maro ao Etazonia na any amin'ny firenena hafa azo antoka. Ifampizaran'ny Sompitra amin'ny (Sekoly) mandray azy ireo ny fandaniana roa taona voalohany amin'ny fametrahana ireo mpampianatra sy ny ankohonany. Izy ihany koa no mandamina ny indray andro mialoha ny fifanakalozan'ny mpamangy sy ny visa-n'ny miaraka aminy.
Tratra tanatin'ny rotaka ihany koa ny zanaka lahimatoan'i Jaber, Yazan Al-Hajari. Tamin'izany fotoana izany izy nianatra mozika klasika tao amin'ny toeram-pianarana hira avo lenta tao Damaskosy ary nanana tarika manokana.